Ithegi: 2010 | Martech Zone
Ukuthenga ngeHolide kwi-Intanethi
NgoMgqibelo, Novemba 12, 2011 NgoMgqibelo, Septemba 19, 2015 Douglas Karr
Ukuthenga kwi-Intanethi kuyakhula unyaka nonyaka… kwaye akukho kuncipha okwangoku. IBlueKai ikhuphe le infographic ilandelayo ukulungiselela eli xesha lokuthenga ngeholide kwi-intanethi. Ukusuka kwi-infographic: Urhwebo olukwi-Intanethi ludlale indima enkulu kwixesha lokuthenga ngeholide phantse unyaka nonyaka ukusukela oko lasekwayo. Kodwa njengoko intengiso ye-Intanethi isiya isiba nobunkunkqele [kwaye abathengi baya besaziwa ngakumbi kwiwebhu], ukuthengwa kweeholide kuyaqhubeka notshintsho olunzulu. Apha ngezantsi kukho iindlela eziphambili zokuthenga ngo-2010
NgoMvulo, Meyi 10, 2010 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Imithombo yeendaba yeNtlalontle Revolution 2 kukuhlaziya ividiyo yoqobo kunye namajelo eendaba ezentlalo kunye ahlaziyiweyo kunye nezibalo zeselfowuni ekunzima ukungahoyi. Ngokusekwe kwincwadi ethi Socialnomics: Imidiya yoLuntu iyitshintsha njani indlela esiPhila ngayo kwaye siShishine nguErik Qualman.
Ukuba awuyiboni le vidiyo ilandelayo, cofa kuyo ukuze ubone ubunyani besongezo besebenzisa iWebtrends! Lo ngumboniso omkhulu wokusetyenziswa kwe-analytics kunye nomsebenzi ongasebenziyo obonwe kwi-Webtrends Engage 2010. Ikhamera ifumana kwaye ilandelele ibheji, ihlaziya iiWebtrends, kwaye- ngexesha langempela-ibonisa iinkcukacha zokuzimasa zamva nje!
Sixakwe lwazi olusuka kwimidiya yoluntu, ukukhangela kunye ne-inbox. Imiqulu iyaqhubeka nokunyuka. Andinamthetho ungaphantsi kwe-100 kwibhokisi yam engenayo yokuhambisa imiyalezo kunye nezilumkiso ngokufanelekileyo. Ikhalenda yam ingqamanisa phakathi kweBlackberry, iCal, iKhalenda kaGoogle kunye neTungle. NdineGoogle Voice yokulawula iifowuni zeshishini, kunye ne-YouMail ukuphatha iifowuni ngqo kwifowuni yam. UJoe Hall ubhale namhlanje ukuba iinkxalabo zabucala kunye nokusetyenziswa kwedatha ebhalwe igama lakho nguGoogle